Home > Zimbabwean Mining Indusrty
The mining industry in zimbabwe accounts for over 60 of exports in the country having a terrain that is quite similar to australia and canada the country is a producer of many minerals and metals zimbabwe is particularly known for its resources of platinum group of minerals pgms as well as nickel gold diamonds and others.
Problems being faced by the mining industry in zimbabwe abandoned mine image credit wenxuecitycom zimsec o level geography notes natural resources problems being faced by the mining industry in zimbabwe disinvestment by tnc after 1980 resulted in some mine closures and creation of ghost towns.
Background of mining in zimbabwe around 1996 the mineral industry in zimbabwe was a major contributor to the world supply of chrysotile asbestos ferrochromium and lithium minerals gold production was the leading sector in 1996 with output exceeding 24 metric tonnes.
Mar 22 2020nbsp018332south africa zimbabwes largest trading partner had as of yesterday confirmed more than 240 cases of people who had tested positive to covid19 economic analysts and captains of industry who spoke to standardbusiness said industry had started feeling the impact of covid.
The mining sector landscape in zimbabwe presents an interesting scenario owing to the large and smallscale mining operations and opportunities the extraction of minerals such as platinumgroup metals is ideally suited to largescale mining while other minerals such as gold can be more suited small.
Car Wash Machine In Kenya Thc3a1i Coal Mine